पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति ? | Butwal Dainik
काठमाडौं । शुक्रबार नारायणहिटी संग्राहलयमा राखिएको श्रीपेच चोरीको प्रयास भयो। हुन त पक्राउ परेका आरोपीले श्रीपेच लगाएपछि राजा हुन्छु भनेर श्रीपेच राखेको शोकेस फुटाउन खोजेको बयान दिए। यहाँ हामी उक्त श्रीपेचको मूल्य कति पर्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। नेपालमा कुनै समय राजाहरुको शासन थियो। तर, गणतन्त्रपश्चात् जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्छन्। तर, नेपालमा शाहवंशीय राजाहरुको शासन सकिएको वर्षौं हुँदापनि यसबारे बहस चलिरहेको छ।
तत्कालीन राजाहरूले राज्याभिषेक गर्दा वा राजगद्दीमामा बस्दा टाउकोमा श्रीपेच पहिरिने चलन थियो। यो चलन रोमन संस्कृति हो। नेपालमा यो परम्परा कहिले भित्रियो भन्ने तथ्य यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६५ साल जेठ २ गते तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई श्रीपेच जिम्मा दिए।
राजतन्त्र सकिएलगतै नारायणहिटी राजदरबारलाई संग्रहालयका रुपमा विकास गरियो। तत्कालीन राजाहरूले प्रयोग गर्ने सबै समान संग्रहालयमा राखियो। तर, श्रीपेच चाहिँ सार्वजनिक गरिएको थिएन। त्यसको केही समयपछि श्रीपेच पनि सर्वसाधरणले हेर्न पाउने गरी राखियो।
उक्त समयमा बन्द कोठामा राखिएसँगै त्यसलाई नेपाल सरकारले असुरक्षित हुने महशुस गर्दै बिमा गर्ने प्रक्रियाअघि बढायो। तर, मूल्य तय हुन नसक्दा श्रीपेचको बिमा गर्ने काममा अवरोध आयो। किनभने बिमा गर्न कुनै पनि वस्तुको ठोस मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। तर, श्रीपेचको मूल्य कति हो भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। किटान गरेर भन्न नसकिने संस्कृति विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
बिमा कम्पनीले यसको मूल्य तय गर्न भनेपछि यसलाई बहुमूल्यको नाम मात्र दिन सकेको संग्रहाहलयले यसमा समावेश गरिएका वस्तुहरूको मूल्य आँकलन गर्न सकेपनि श्रीपेचको मूल्य तय गर्न सकेन। श्रीपेचमा सुन, चाँदी, हिरा, मोति, पन्नाजस्ता बहुमूल्य धातु हुन्छन्। श्रीपेचमा संसारबाटै लोप हुन लागेको हुमायो चराको प्वाँख राखिएको हुन्छ।
हुमायो चरा संसारबाटै लोप हुन लागेको छ। त्यसैले श्रीपेचको पुनर्निर्माण गर्न असम्भव रहेकाले अहिले पनि सरकारलाई मूल्य निर्धारण गर्न समस्या भएको छ। बिमा गर्ने भनेको क्षतिपछि त्यसलाई पुनर्निर्माणका लागि हो। हुमायो संसारबाटै लोप हुने चरणमा छ, जसकारण प्वाँख पाउन सकिँदैन। त्यसैले श्रीपेच फेरि बनाउन असम्भव छ।
अहिले नारायणहिटीमा राखिको श्रीपेच राजा वीरेन्द्रको राज्यअभिषेकको समयमा बनाइएको बताइएको छ। यसको डिजाइन प्रेमलाल श्रेष्ठले गरेका हुन्। मूल्य तोक्न नसकिने भएर बहुमुल्य मात्र भनिएको श्रीपेचको सरक्षामा पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।